လီဗာပူးပွဲ ခန့်မှန်းမှန်ခဲ့တဲ့ အိုဝင် ဒီည ယူနိုက်တက်ပွဲကို ဘယ်လိုတွေပြောထားလဲ...? - the One Sports Journal
October 30, 2021 Nan Da Articles 0
ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ အိုဝင်က လီဗာပူးကို အနိုင်ပေးခဲ့ပြီး လီဗာပူးအသင်းနိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။
ဂိုးပြတ်သွားခဲ့တာကတော့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ကုသိုလ်ပေါ့ ဒီတစ်ပတ်မှာ အိုဝင်က ယူနိုက်တက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းပေးထားပြန်ပြီ…
စပါးအသင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက မော်ရင်ဟိုနဲ့အတူ အိုးထရက်ဖို့မှာ (၁-၆)ရလဒ်နဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု စပါးနည်းပြ နူနိုဆန်းတိုစ့်က ရလဒ်မကောင်းလို့ အထုတ်ခံရတော့မယ် နည်းပြ၊
ပရီမီးယားလိဂ် (၉) ပွဲကစားပြီချိန်မှာ ၄ ပွဲ ရှုံးပြီး အဆင့် (၆) နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ စပါးနဲ့
(၃)ပွဲရှုံး (၂)ပွဲ သရေကျပြီး အဆင့် (၇) နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုကနေ
ပွဲအပြီးမှာ နည်းပြ အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိ နေတာကလည်း
ပုံမှန်လိဂ် ပွဲတွေထက် ဒီတစ်ပတ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေမှာ သေချာတယ်။
“ရာသီအစောပိုင်းပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဒီနှစ်သင်းရဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ကြိုသိနေသလို ခံစားရတယ်။
စပါးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မသိပါဘူး။
သူတို့ကို ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ သူတို့က ပြန်လာမလိုလိုနဲ့ ပြီးရင်လည်း ဝက်စ်ဟမ်းကို ရင်ဆိုင်တုန်းက စိတ်ပျက်စရာ ခြေစွမ်းမျိုး ပြတော့တာပါပဲ။”
“လီဗာပူးကို ရင်ဆိုင်တုန်းက ခံစစ်ကစားပုံကတော့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အဆိုးဆုံး ပုံစံပါပဲ။
သူတို့ သိပ်ကို ဆိုးရွားခဲ့တယ်။ တိုက်စစ်ကစားပုံတော့ ကောင်းပါတယ်။
ပွဲအစောပိုင်းမှာတင် အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့ပြီး သူတို့ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသင်းမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ကျဆင်းနေပြီး ရော်နယ်ဒိုက ဒါတွေကို ညှိပေးပါလိမ့်မယ်။”
“နည်းပြနှစ်ဦးလုံးက ဖိအားတွေနဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့် အိုလီပေါ့။
မနှစ်တုန်းက ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီကွင်းမှာပဲ ၃-၁ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သလို စပါးအိမ်ကွင်းသစ်မှာ သူတို့ မရှုံးဖူးသေးပါဘူး။
ယူနိုက်တက်က အသာရနိုင်ခြေရှိပါတယ်” ဆိုပြီး အိုဝင်က ပြောပါတယ်။
အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းရလဒ်ကတော့ ယူနိုက်တက် ၂- ၁ စပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားတစ်ယောက် သူအလွတ်ကျက်ထားတဲ့ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက်နဲ့ပဲ ဆက်ပြီးပွဲထွက်လာအုံးမလား…?
ပေါ့ဂ်ဘာ အနီကတ် ထိထားတဲ့အခြေအနေမှာ ဗန်ဒီဘိခ်ကို ပွဲထွက်ခွင့်ပေးလာမလား…?
ဒီပွဲဟာ ဆိုးလ်ရှားအတွက်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်သလို၊ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အရံခုံပေါ်မှာ ရောက်နေကြတဲ့
စူပါစတားတွေရဲ့ကစားအားတွေကို ဆိုးလ်ရှား ထုတ်သုံးတော့မလားဆိုတာကလည်း စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါပဲ။
ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းအားနည်းနေချိန်မှာ ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်ရှိနေဖို့ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ မြင်ချင်နေတဲ့ ကစားသမားအတွဲတွေကို
သူတို့အားသာတဲ့ နေရာတွေမှာ ကစားခွင့် ပေးလိုက်မှ ဖြစ်တော့မှာပါ။
လီဗာပူးပြဲ ခန႔္မွန္းမွန္ခဲ့တဲ့ အိုဝင္ ဒီည ယူႏိုက္တက္ပြဲကို ဘယ္လိုေတြေျပာထားလဲ…?
ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲမွာ အိုဝင္က လီဗာပူးကို အႏိုင္ေပးခဲ့ၿပီး လီဗာပူးအသင္းႏိုင္သြားခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ မွန္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္။
ဂိုးျပတ္သြားခဲ့တာကေတာ့ ဆိုးလ္ရွားရဲ႕ ကုသိုလ္ေပါ့ ဒီတစ္ပတ္မွာ အိုဝင္က ယူႏိုက္တက္ႏိုင္မယ္ဆိုၿပီးခန႔္မွန္းေပးထားျပန္ၿပီ…
စပါးအသင္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ေမာ္ရင္ဟိုနဲ႔အတူ အိုးထရက္ဖို႔မွာ (၁-၆)ရလဒ္နဲ႔ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ခဲ့ဖူးတယ္။
ဒါေပမယ့္ အခု စပါးနည္းျပ ႏူႏိုဆန္းတိုစ့္က ရလဒ္မေကာင္းလို႔ အထုတ္ခံရေတာ့မယ္ နည္းျပ၊
ပရီမီးယားလိဂ္ (၉) ပြဲကစားၿပီခ်ိန္မွာ ၄ ပြဲ ရႈံးၿပီး အဆင့္ (၆) ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ စပါးနဲ႔
(၃)ပြဲရႈံး (၂)ပြဲ သေရက်ၿပီး အဆင့္ (၇) ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ ယူႏိုက္တက္ရဲ႕ ေတြ႕ဆုံမႈကေန ပြဲအၿပီးမွာ နည္းျပ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားႏိုင္ေျခရွိ ေနတာကလည္း
ပုံမွန္လိဂ္ ပြဲေတြထက္ ဒီတစ္ပတ္မွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းေနမွာ ေသခ်ာတယ္။
“ရာသီအေစာပိုင္းပဲ ရွိေသးေပမယ့္ ဒီႏွစ္သင္းရဲ႕ ေဘာလုံးရာသီက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ႀကိဳသိေနသလို ခံစားရတယ္။ စပါးမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ မသိပါဘူး။
သူတို႔ကို ၾကည့္လိုက္တိုင္းမွာ သူတို႔က ျပန္လာမလိုလိုနဲ႔ ၿပီးရင္လည္း ဝက္စ္ဟမ္းကို ရင္ဆိုင္တုန္းက စိတ္ပ်က္စရာ ေျခစြမ္းမ်ိဳး ျပေတာ့တာပါပဲ။”
ဖရီးကစ်ဂိုးနဲ့ ကစားသမားဘဝရဲ့မှတ်တိုင်သစ်တစ်ခုတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မိုဗစ်